Ndepụta PowerPoint kacha mma maka Mmụta | Nzukọ mkpanaka
Edere Ferreno | | Ike Microsoft, Autlọ ọrụ akpaaka
PowerPoint bụ ngwa na -aga n'ihu dị oke mkpa na agụmakwụkwọ. Ọ bụ ihe a na -ahụkarị ka a na -eme ngosi na ngwaọrụ a iji gosipụta isiokwu, ma ọ bụ onye nkuzi mepụtara ihe ngosi mmịfe kwuru ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ igosipụta ọrụ ị mere. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị ọrụ chọta ndebiri PowerPoint maka agụmakwụkwọ nke ha nwere ike iji mee ihe ngosi ha.
Ọ bụrụ na ị na -achọ ndebiri PowerPoint ọhụrụ maka agụmakwụkwọ, anyị na -ahapụrụ gị n'okpuru nhọrọ nke kacha mma. Na mgbakwunye na ịgwa gị otu ị ga-esi budata ha, ka ọ nwee ike ị mepụta ihe ngosi ahụ na mmemme ụlọ ọrụ Microsoft ama ama. Ma dịka onye nkuzi ma ọ bụ nwa akwụkwọ, ndebiri ndị a ga -enyere gị aka.
Ozi ọma ahụ bụ na enwere nnukwu nhọrọ nke ndebiri dị ugbu a maka agụmakwụkwọ, nwere ụdịdị dị iche iche na -adaba n'ọnọdụ niile, isiokwu ma ọ bụ ihe ngosi. Yabụ na anyị ga -enwe ike ịchọta ihe dabara n'ihe anyị chọrọ. N'ụzọ dị otu a, ịme ngosi site n'iji PowerPoint ga -adị mfe karịa, site n'inwe ụfọdụ ihe mmịfe na -adọrọ mmasị ma ọ bụ na -adọrọ mmasị, nwere atụmatụ na -enyere ngosi anyị aka, n'ụzọ mmadụ niile ga -aghọta isiokwu ahụ ma ọ bụ na -ejigide mmasị n'ime ya.
Mgbe ahụ, anyị na -ahapụrụ gị nhọrọ nke kacha mma ndebiri PowerPoint maka agụmakwụkwọ anyị nwere ike iji ugbu a, na mgbakwunye na ụzọ anyị nwere ike isi budata ha na PC. Na mgbakwunye, ndebiri niile anyị na -egosi gị n'isiokwu a bụ n'efu, nke enweghị mgbagha bụ ihe dị oke mkpa maka ụmụ akwụkwọ ga -ewetara ihe.
1 Template nwere ọkụ ọkụ ọkụ
2 Template nwere eserese nka
3 Template nwere doodles
4 Template na imekọ ihe ọnụ
5 Template nwere oche
Template nwere ọkụ ọkụ ọkụ
A na -ejikarị bọlbụ ọkụ dị ka ihe nnọchianya nke ọgụgụ isi na imepụta ihe., ihe na -abịa site n'inwe ezi echiche. Enwere okwu gbasara nke a n'ezie, yabụ na ha bụ ezigbo nhọrọ maka ngosi n'okwu a. Nke a bụ otu n'ime ndebiri PowerPoint kachasị mma maka agụmakwụkwọ iji bulbs ndị a mee ihe ọchị, mana n'oge na -adịghị anya ọ ga -adọpụ ụdị ngosi a. Igwe ọkụ ndị a ga -adị na slides ọ bụla, mana dịka ị pụrụ ịhụ, n'ụzọ dị iche iche, ka ha wee jikọta nke ọma.
Ihe ndebiri a nwere ngụkọta nke ihe ngosi 25, nke a na -edezi nke ọma. Nke a ga - enyere gị aka ịhazi ha ka masịrị gị na mkpa gị oge niile. Ị nwere ike ịgbanwe ederede, ọnọdụ ederede ma ọ bụ ọnọdụ foto ndị ahụ na -enweghị nsogbu ọ bụla, ka ọ bụrụ ngosipụta nkeonwe dabara na isiokwu gị. Na mgbakwunye, anyị nwere ike tinye ha eserese ngwa ngwa, ihe doro anya dị mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Otu n'ime ndebiri PowerPoint kacha atọ ụtọ maka agụmakwụkwọ. Ọzọkwa, ọ bụ dakọtara na PowerPoint na Google Slides, ka ị nwee ike iji otu n'ime ngwaọrụ abụọ ahụ mgbe ị na -eme ngosi gị na klaasị. Ị nwere ike ịhụ nhazi ya, yana ịga n'ihu na nbudata ya n'efu na njikọ a. Ezi template ga -eburu n'uche na nke ahụ na -ahapụ anyị imepụta ihe ọhụrụ.
Template nwere eserese nka
Ndị ọ dị mkpa ime ngosi na isiokwu dịka injinia, ihe owuwu ma ọ bụ mmemme Ha ga -enwe ike iji ndebiri a. Ọ bụ ndebiri ebe anyị nwere atụmatụ ọrụaka. Ọ na -e imomi ụdị atụmatụ atụmatụ, na mgbakwunye na inwe font ejiri mee ihe osise teknụzụ na -ewu ma ọ bụ na ụlọ ọrụ. Ọ na -abịa na ọkọlọtọ na -acha anụnụ anụnụ, mana ndị ọrụ nwere ike ịhazigharị ya na mmasị ha n'oge ọ bụla, n'ihi na ị nwere ike ịgbanwe ụcha ndabere ahụ ka ọ daba na ngosi gị. Otu n'ime ụdị ndebiri PowerPoint dị mma maka agụmakwụkwọ.
Ndepụta a na -edobe isiokwu a n'oge slides gị niile. Ihe mmịfe ndị a, 25 na mkpokọta, na -edezi oge niile. Enwere ike ịgbanwe agba nke otu, leta, font, nha nke otu, yana foto. Na mgbakwunye, ha dakọtara na ụdị eserese ma ọ bụ akara ngosi niile, ihe dị mkpa na ngosipụta na isiokwu dịka injinịa ma ọ bụ mmemme. Na mgbakwunye, a na -enye ndị ọrụ ọtụtụ akara ngosi, ka ha nwee ike mepụta ndebiri ma ọ bụ ngosi zuru oke karịa n'oge ọ bụla.
Dị ka ndebiri PowerPoint ndị ọzọ maka agụmakwụkwọ na ndepụta a, Anyị nwere ike ibudata ya n'efu na PC anyị, dị na njikọ a. Enwere ike iji ndebiri a na PowerPoint na Google Slides, yabụ na agbanyeghị na mmemme abụọ a bụ nke ị na -eji n'okwu gị. Ọ bụrụ na ị na -achọ ndebiri nwere isiokwu nke injinịa ma ọ bụ ihe owuwu kpaliri, ọ bụ otu nhọrọ kacha mma ị nwere ike ibudata.
Template nwere doodles
Otu n'ime ndebiri PowerPoint kacha mma maka agụmakwụkwọ na anyị nwere ike ibudata bụ nke a nwere doodles. Dị ka ị na -ahụ na foto a, o nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke eserese nwere ihe mmụta. Site na mkpịsị akwụkwọ, bọọlụ ụwa, akwụkwọ, akwụkwọ ndetu, bọọlụ, pensụl na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ ezigbo ndebiri iji ma ọ bụrụ na anyị ga -ewepụta isiokwu ezubere maka ndị na -eto eto, dịka ọmụmaatụ, n'ihi na ọ ga -enyere aka mee ka ngosi a dịrị ndị na -ege ntị mfe.
Ejila aka see eserese ejiri na ndebiri. Ụkpụrụ a dabara na PowerPoint na Google Slides, dị ka ndị ọzọ anyị gosiri gị na listi a. Ọ na -eitomi ihe ndị a na -ahụ anya, yabụ na ọ bụ ezigbo enyemaka maka ụmụ akwụkwọ ka ha mụta site na usoro anya, ebe ọ na -enye ohere ijigide mmasị oge niile ekele maka iji agba na eserese ndị ahụ. Na mgbakwunye, ọ bụ ndebiri ahaziri. Anyị nwere ike ịgbanwe agba n'oge ọ bụla, si otu a na -ekepụta ngosipụta dị ike karịa.
A na -edezi ihe mmịfe niile na ndebiri PowerPoint a, ka ị nwee ike ịhazigharị ihe niile dabere n'ụdị ngosi ị ga -eme. Ọ ga -ekwe omume ịgbanwe agba, font, yana iwebata foto, eserese ma ọ bụ ụdị akara ngosi dị iche iche na -enweghị nsogbu ọ bụla. Ezigbo template maka agụmakwụkwọ ị nwere ike budata n'efu na njikọ a.
Template na imekọ ihe ọnụ
Ọ bụ ihe a na -ahụkarị ịrụ ọrụ otu na mgbe ahụ ị ga -egosi ihe i mere. Ihe ndebiri PowerPoint a na -ejide ọrụ otu a na nhazi ya. Ya mere, ọ bụ otu n'ime ndebiri PowerPoint kachasị mma maka agụmakwụkwọ, nke nwere ọgbara ọhụrụ, na -adọrọ mmasị na nke na -achọ ịtụgharị uche oge niile ọrụ ndị mmadụ rụrụ na ọrụ a. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịgbanwe agba nke ya n'ụzọ dị mfe, ka ọ dabara nke ọma na ọrụ a na -ekwu.
Ọ bụ ndebiri ọgbara ọhụrụ karịa nke ndị ọzọ. Ekele maka nke a, ọ bụghị naanị otu n'ime ndebiri PowerPoint anyị nwere ike iji na agụmakwụkwọ, mana ụlọ ọrụ nwere ike iji ya na ngosipụta ọrụ. Dịka ọ dị na ndebiri ndị ọzọ anyị hụrụ, enwere ike ịhazi ya, ka anyị nwee ike hazie ihe ndị dị na ya ka ọ masị anyị, ka o wee zie ozi anyị chọrọ nke ọma. Ọzọkwa, ọ dakọtara na PowerPoint na Google Slides.
Oge ọzọ ị ga -arụkọ ọrụ ọnụ ọ dịkwa mkpa ịme ngosi, ndebiri a ga -abụ ezigbo enyemaka. Ọ nwere nhazi ọgbara ọhụrụ, na -enyere aka izi ozi gị yana na -egosipụtakwa nke ọma otu arụrụ arụ. Enwere ike ibudata template PowerPoint ugbu a n'efu na njikọ a.
Template nwere oche
Ndepụta nke ise na ndepụta ahụ bụ ndebiri nke anyị nwere ike iji n'ọtụtụ ọnọdụ. Ọ na -ewepụta ihe eji arụ ọrụ na desktọpụ, yana ihe ndị dị ka laptọọpụ ma ọ bụ akwụkwọ na ihe ndị ọzọ na -ahụkarị nke otu, dịka ọmụmaatụ. Nke a bụ ihe na -enyere onye ọ bụla hụrụ ihe ngosi ahụ aka ịmata ihe ndị dị na ya, yana usoro imepụta ya, dịka ọmụmaatụ. Ọ dịkwa mma nke ukwuu, ebe anyị ga -enwe ike iji ya mee ihe ngosi n'ọtụtụ isiokwu dị iche iche, ihe na -enyere aka mee ka ọ dị mma na agụmakwụkwọ.
Enwere ike iji ya na ngosi na ọkwa agụmakwụkwọ niile, kamakwa ọ bụrụ na anyị na -achọ imetụ aka n'okwu n'okwu, dịka ọmụmaatụ, ime ka ọ nọrọ jụụ ma nye aka na ntinye aka nke ndị bịara. Enwere ike ịhazi ihe niile dị na ngosi a, ka ọ wee nwee ntụsara ahụ ma si otú a dabara isiokwu anyị na -ekwu maka ya. A na -akwado ojiji nke eserese na akara ngosi na ya. Na mgbakwunye, ọ dakọtara na PowerPoint na Google Slides.
Nbudata ndebiri a maka agụmakwụkwọ PowerPoint bụ n'efu, dị na njikọ a. Ị nwere ọnụọgụ mmịfe dị ukwuu n'ime ya, yabụ ị nwere ike họrọ nke ịchọrọ iji mee ihe ngosi. Ezigbo nhọrọ nke ị nwere ike iji n'ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche, yabụ egbula oge iji ya na ngosi gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Autlọ ọrụ akpaaka » Ụkpụrụ PowerPoint kacha mma maka Mmụta
Egwuregwu ọgba tum tum kacha mma maka PC